လူသားအားလုံးအတွက်: Libyan Woman Claims Rape By Soldiers
Posted by မိုးယံ at 1:12 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Thanks for ur news dear bro!
Haveanice day for u.
ကြည့်ပြီးတော့ စဉ်းစားနေတာ ယုံရအခက်ကြီး၊ သူဘဝနောက်ဆက်တွဲတော့ မလွယ်ဘူး၊ ကဒါဖီကမျက်မစားဘူး။